Introduction to newer male contraceptive methods
1532 days ago	(http://health.ngoinmyanmar.org)
အမျိုးသားသုံး သားဆက်ခြားနည်းများ အကြောင်း မိတ်ဆက်
(အမျိုးသမီးများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဤဆောင်းပါးကို ရေးပါသည်။)
Add to: ">
What Myanmar Actress, Chit Snow Oo is doing at the moment?
1532 days ago	(http://www.myanmarcelebrity.com)
Myanmar Actress, Chit Snow Oo has read more » 1 Comment Add this link to... Bury
Add to: Myanmar Actress, Chit Snow Oo has ">
Powerful Support Ticket System: HelpDesk Pilot ($100 Special Discount To WRD Readers)
1533 days ago	(http://feedproxy.google.com)
HelpDesk Pilot isaprofessional support ticket & helpdesk software for managing support requests sent via e-mail or the web interface easier and better.The application runs on your server (PHP & MySQL / MSSQL) forabetter customization & integration.Tip: Details of the 	read more » Discuss Add this link to... Bury
day of the poems
1532 days ago	(http://khinoomay77.blogspot.com)
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။poem of the dayမိုးတွေ ကလည်းစွေ..ကိုယ့်အသည်းတွေ ကလည်းကြွေ..မင်းအနားမှာလေ....ဒီကဗျာ လား ဘာလား ခေါ်ရမလား မသိတဲ့စာစု ကို နေနေနိုင်ဘလော့ ကို သွားလည်ရင်းနဲ့ စိတ်ကူးပေါက်လာလို့ ရေးခဲ့တာ ကို ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ကြိုက်လို့ ပြန်ကူးလာပြီး ပို	read more » Discuss Add this link to... Bury
Mister Royal-Myanmar (Mar)
1532 days ago	(http://feedproxy.google.com)
အမျိုးသား Photogenic ပြိုင်ပွဲလေးပါခင်ဗျာ။ ပါဝင်ယှဉ် ပြိုင်ကျသော ညီအစ်ကိုများ ကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်။ သင်တို.အနေဖြင့် မိမိသဘောကျသော ဓါတ်ပုံ ရှင်အား မှန်မှန်ကန်ကန် မဲပေးကျပါခင်ဗျာ။ ပြိုင်ပွဲဝင်သူများ အား စိတ်အနှောက်အယှတ် ဖြစ်စေသော comment များ၊ ပုပ်ခတ် ပြောဆိုချင်းများ မပြုလုပ်ကျ ပါရန် မေတ္တာ...	read more » Discuss Add this link to... Bury
သင်တို့ ပြောသည့် ယတြာ နှင့် ကျွန်ုပ်၏ စကား
1532 days ago	(http://mmastrology.myanmarbloggers.org)
စကားကြီးစကားကျယ်မဆို ။ ခပ်ရှင်းရှင်းသာ ပြောမည်။ သင်တို့တတ်သည့်ပညာဖြင့် တစ်နေ့ လျှင် လူတစ်ယောက်မျှအား ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပေးပါ ဟု ပြောဖူးပါလေစ၊" ဟ - ခွေးတွေ ၊ ခွေးတွေ . . ငါ့ကို လာဆွဲနေကြတယ်။ မောင်းပေးကြပါ ၊ နှင်ထုတ်ပေးကြပါ "အရှင်သောဏမထေရ်၏ ဖခင် ဦးပဉ္ဇင်းကြီးသည် လူ့ ဘ၀	read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: အရှင်သောဏမထေရ်၏ ဖခင် ဦးပဉ္ဇင်းကြီးသည် လူ့ ဘ၀">
ပုဂံ၏ ဆည်းဆာ ချိန်များပုဂံ ဆည်းဆာ ချိန်တွေ အလွန် လှပခဲ့သည်။ သူ ကျမ အား ပုဂံ ပုံပြင်တွေ ပြောပြ ခဲ့ သလို ပုရှကင်(Пушкин) ၊ မာယာကော့ဗ်စကီး (Мойковский) ၊ လာတီမာတီ ၊ ပယ် ရီရီပါဒီ ၊ ဒါစ်တိုယက်ဗ်စကီး (Достоевский)တို့ ၏ နာမည်ကျော် စာပေ တွေ နှင့် ကဗျာ များ ကို ရွတ်ပြခဲ့သည်။ ကဗျာဆရာ ဘိုင်ရွန် ရဲ့ read more » Discuss Add this link to... Bury
Myanmar Popular Singer and Fashion Girl, Rebecca Win's hot style
1533 days ago	(http://www.myanmarcelebrity.com)
Rebecca Win is Myanmar popular tee	read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: Rebecca Win is Myanmar popular tee">
| Bookmarks « previous1...9101112131415161718...105 next »